Alle weyne tolow ahaanshihiisa maka fikiraa?! – Kaasho Maanka
Alle weyne tolow ahaanshihiisa maka fikiraa?!
W/Q: Aadan Cali
Bili-aadanku markuu caqliyaystay ee uu isku dhex arkay badwaynta nolosha waxuu bilaabay inuu suaalo badan is waydiiyo. Maxay ahayd meeshani? Seen ku imi halkan? Yaa i keenay tolow?(waayo caqliga bidaaiga ma malayn karo sabab la’aan). Sababma ayaan u joogaa halkan? Iyo suaalo kale oo badan isaga oo bilaadanku wareersan kuna jira xaalada uu Albert Camu u yaqaan (Absurd ama throwness) oo aan waxba ka duwanayn dareenkaaga markaad soo gasho qol aananad cidna ka garanayn ee inta raamsiga la joojiyo lagu soo wada eego.
Intaa ka dib bilaadanku waxuu bartay inuu macnayaal farabadan siiyo wujuudka ama jiritaanka gaar ahaan diimaha sheegta in ay samada ka yimaadeen waxay ku doodeen in dusheenan sare uu joogo (Yahweh, God ama Allaah) uuna isagu yahay ka ina abuuray meeshana ina keenay diimahaa samaawiga ah ama (Abrahamic religions) waxay ina bareen Eebbe weyne mar waxay inoo sheegeen inuu allaah yahay sidii qof inala mida oo kale kaasoo xanaaqa, farxa, murugooda, aargoosiga yaqaan saaxiibo iyo cadaw labadaba leh hiilkeenana u baahan saynu kiisaba ugu baahannahay.
Mar kale diimahaasi waxay ina bareen in Eebbe weyne yahay wax aynaan arki karin,maqli karin, kaaga daran xitaa aynaan fahmi karin.
Hadaba marna lagama yaabo in ruux Eebaha quraanka rumaysani uu alle kasoo qaado jire ama (being) aan fekerin oon caqli lahayn waayo caqliga ayaa aad uga sita cadhada ay Eebbe usugaan. halkaan u socdaa waxay tahay inta aynu noole ama jire naqaan biliaadanku waa ka ugu caaqilsan, caqligiisaasina dhib aan noolaha kale la qabin buu u keenay waxaana kamida dhibkaa su’aalaha aanu weli jawaabta lagu qanci karo u helin sida Maxaabay horta wax u jiraan? (Why there is some thing rather than no thing).
Haddaan raacno oon ku qanacno sharraxaadda diimaha jawaabtaasi way fududahay waayo waxay wax u jiraan alle ayaa ahaysiiyay. Suaasha markii aadanuhu ka nastay hadana waxuu caqligiisu (shaydaanku) ku shukaansaday (why there is a god) oo maxuu alle u jiraa sow suuragal ma ahayn inaanu isaguba jirin xageese ka yimi.
U malayn maayo in suaasha cidi jawaab u hayso alle mooyee balse falaasifada iyo inta dadka qalqaaliyiinta ahi waxay isku dayeen inay isku noqnoqotadaa joojiyaan waxaanay sheegeen inuu jiro shay asali ah (waajibul wujuud) ama (Neccesary being).
Suaashaydu waxay tahay walow aanan jawaab filayn tolow Alle isagu ma ka fekeraa meeshuu ka yimi Iyo cidda waxanoo masuuliyada gacanta u gelisay? Tolow alle weyne maka fekeraa sababta uu u jiro?
Fadlan geli Email-kaaga oo rukumo si laguu ogaysiiyo qormooyinka cusub.
Cusub Ugu codka badan
2 Sano Kahor
Nabad gala saxiibayaal, ka gadaal: waxaan doonayaa dhowr su’aal oo aan is weydiiyo inaad igu caawisaan jawaabahooda, hadaad heysaan: Horta maxaan wax u rumeynaa? maxaa inagu kalifaya inaan wax rumeyno? Waxyaabaha ogaaney/ogaano, garaadku ina garadsiiyey/garadsiiyo, cilmigu ina barey/baro oo qura miyaan rumeynaa jiritaankooda ama jiritaan la’aantooda? Garaadkeena oo qura ma lagu go’aamin karaa inaanu nahay noolaha ugu caqliga badan ee jira? Garaadkeena anagoo adeegsaneyna Maangalnimada jiritaanka shey/walax…IWM ayaan go’aansanaa in xaqiiqada jirta iyo waxyaabaha khuraafaadka ah, waxaan aqoon u laheyn ama garaadkeenu haleelin ma ka dhigan tahay inaanu jirin? ma jiraan Aliens-ka? Ma aaminsan tahay jiritaanka Jinka? Haa hadey tahay,… Akhri faalladan »
Xoriyadda iyo Masuuliyadda
W/Q: Dheeman Luul
Qaybta: Aragtiyo, Falsafad
Xoriyaddu waxay ku hoos jirtaa masuuliyadda, waxaa qaba aragtidaan ama laga soo wariyey faylasuufkii Danish-ka ahaa "Soren kierkegaard". Tan iyo intii ay nolosha dadku jirtay xoriyadu waxay ka ahayd nolosha dadka qayb muhiima iyadoo hadba heer soo joogtay. Hayeeshee waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood oo muhiima inay xoriyadda dadku soo martay sida laga soo wariyey culumada taariikhda falsafadda uu...
Akhri Qormadan1 Faallo
Thomas Paine: Faylasuufkii kacaanka
W/Q: Warsame Jaamac
Qaybta: Diinta Kiristaanka, Falsafad, Xulka
Malahayga ma akhrin faylasuuf ka saamayn wayn Thomas Paine marka ay timaado fikiradda siyaasadda, xuquuqda dadka iyo madax-bannaanida dawladaha hab is xukunka doorashada iyo mataaladda tooska ah ku dhisan. Suuragal maaha inaan halkan ku soo koobo taariikhda iyo fikiraddii Thomas Paine balse waxaan ku hakanaynaa oo si kooban uga hadli doonnaa laba qodob oo kala ah kaalintii uu ku lahaa kacaankii...
Diinta iyo dadka iyamaa mudan?
W/Q: Khaled Hassan
Qaybta: Aragtiyo, Diimaha, Falsafad
Ka jawaabidda waydiinta sare ku xusan waxay fududaanaysaa marka aan ogaano mudnaanta iyo qiimaha qofku leeyahay, qof aan garanayn mudnaanta insaanku leeyahay way adag tahay inuu jawaab dhex-dhexaada ka bixiyo. Inta aynaan jawaabta u galin waxaa waajib ah inaan is waydiino diintu ma jiri kartaa dad la’aan? Dadku se ma jiri karaan diin la’aan? Dadku waa jiri karaan waana noolaan karaan...
Akhri Qormadan4 Faallo
Mindida waqtigaa af-tira (2/2)
W/Q: Qoraa Dahsoon
Qaybta: Aragtiyo, Diin dhaqameed, Falsafad, Sooyaal
Qoraalkan kii ka horreeyay (halkan ka akhri) waxaan kusoo sheegnay habkii nooca dhaddig lagu jabiyay oo uu nooca lab hogaanka nolosha ku hantiyay ama dib ugula soo noqday. Halkaana aan kasii anba-qaadno oo aan kasii wadno sida hadba ay isu bed-bedalaysay taariikhdu. Faarisiyiin Faarisiyiintii hore ama Iiraaniyiintii hore waxay aaminsanaayeen in dunida uu iska leeyahay boqor awood badan oo loo...
Akhri Qormadan Aragtidaada ku darso
W/Q: Shaafici Xasan Maxamed
Nolosha dadka hal wax baa tayo u yeela, waxaasina waa in qofka laga qariyey mustaqbalkiisa iyo waxa uu barri iyo saaddanbe mudan doono. Haddii qof loo caddeeyo maalmihiisa soo socda oo tusaale ahaan loo sheego in uu 100 sano ka dib dhiman doono uuna boqolkaas sano ahaan doono dadka qofka ugu hodansan oo ugu magac dheer, isla markaas maalin kasta waxa uu samayn doono iyo meesha uu joogi doono loo...
Hummaagyo kala janjeera
Dhulka iyo cirka ayaa dadka iska dhalay. Balse, yaa taas garan kara? Kuwii ka dhex baxa un baa garan kara. Eebbe iyo abuurtiisu waa ay isku dhex jiraan oo mid qura ayay isku yihiin. Balse, magacyada ayay ku kala duwan yihiin. Mucjisaduna waa wadada Eebbe iyo abuurtiisa isku xirta. Marka ay dadku quruxda gartaan ayay foolxumada fahmaan. Marka ay wanaagga dareemaanna xumaanta ayay arkaan. Wax jira...
Akhri Qormadan2 Faallo
W/Q: Aadan Cali 2nd July 2018
Kor ku laabo
Nala soo xiriir | Nagu saabsan